निजामती सेवामा नयाँ नियम, हट्यो खरिदार पद, अरु के–के भयो परिवर्तन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ श्रावण २०७५, मंगलवार १२:४२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । निजामती सेवामा नयाँ परिवर्तनको तयारी भएको छ । यो नयाँ परिवर्तनमा खरिदार पद हट्ने भएको छ । त्यसका लागि अब खरिदार पदमा खुल्ला विज्ञापन नै खुलाइने छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार्र पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ । यसअघि खरिदार पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो । हाल कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा खरिदार पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘कार्यालय सहयोगीबाहेक खरिदार पदभन्दा तल अर्को पद छैन । कार्यालय सहयोगी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले अब खरिदार पद राखिराख्नु परेन ।’ उनले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।
अब आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाको आधारमा १० प्रतिशत खरिदार पदमा पूर्ति गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसको अर्थ एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण कार्यालय सहयोगीहरु आन्तरिक परीक्षाबाट र बढुवाबाट खरिदार बन्नेछन् । र, खरिदार पदमा रहेका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त भएमा दरबन्दी स्वतः खारेज हुँदै जानेछ । यसअघि खरिदारभन्दा तलको मुखिया पद पनि यसैगरी खारेज भएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा पनि खुल्ला विज्ञापन नगराउने उल्लेख छ ।
यसैबीच नायबसुब्बा पदमा अबदेखि ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने भएको छ । यसअघि सुब्बामा ४० प्रतिशत मात्रै खुल्लाबाट पदपूर्ति हुने गर्दथ्यो । यसैगरी कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सुब्बा पदको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) र कार्यक्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था हटाइएको छ । मस्यौदामा लेखिएअनुसार अब सुब्बा पदमा ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ । यस्तै आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाबाट २० प्रतिशत सुब्बा सरकारी सेवामा भर्ना हुनेछन् ।
काठ, दाउरा बिक्रीका लागि नेपाल वन निगम बनाउने
काठमाडौं । सरकारले काठ, दाउरा बिक्रीका लागि नेपाल वन निगम बनाउने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले…
सपनामा यौन सम्पर्क गरेको देखे यस्तो संकेत-जानी राखौ!
काठमाडौं । सपनाको आ-आफ्नै एक अलग संसार हुन्छ। संसारका हरेक व्यक्तिले राती वा दिनमा सुतेको बेला सपना अवश्य देख्छन्।…
बैंकमा सधैं उच्‍च ब्याज, व्यवसायी सडकमा
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप तथा पुँजीको कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोकिएको सिमानजिक पुगेको छ। अहिले सरदर…
काठमाडाैं । एक स्वस्थ्य मानिसका लागि रक्सी वा चुरोट दुवै लाभदायक होईन् । एउटा अनुसन्धानले एक सातामा ७५० मिलिलिटर…